UAG Boqortooyada, quruxda iyo bahalka dacwadaha loogu talagalay taleefankaaga iPhone | Wararka IPhone
UAG waxaa lagu gartaa kiisaskeeda ilaalin leh oo leh nashqado aad u dagaal badan, mid ka mid ah kiisaskeeda ugu guulaha badan, UAG Monarch, ayaa hadda la cusbooneysiiyay si ay ula jaan qaado moodooyinka cusub ee iPhone. Isku darka qalabka sida birta, maqaar, iyo caag, kiiskan millateriga u eg runti waa miisaanka culus oo ku dar kaliya dhumucda saxda ah ee ilaalinta ugu badan.
Ka kooban shan lakab oo ilaalin ah oo qalab kala duwan leh iyo dhammeystir aad u fiican, shaki la'aan waa mid ka mid ah tixraacyada daboolida ee suuqa iyo mid ka mid ah kuwa yar waxay cadeyn karaan iska caabinta dhicitaanka oo ah labalaab loo baahan yahay heerarka milateri. Waxaan kuu sheegeynaa dareenkeena hoose.
2 Shahaado ciidan
Kiiska Boqortooyada UAG wuxuu ka samaysan yahay qalab kala duwan oo lagu daro shan lakab oo difaac ah taasoo keenta kiis runti ilaalin ah. Balaastik, maqaar qaali ah iyo biraha bixiya iska caabin weyn oo naxdin iyo dhicitaan, laakiin sidoo kale UAG waxay taxaddar ku bixisay sidii loo gaari lahaa naqshad aad u fiican. Cunnooyinka muraayadaha iPhone-gaaga ayaa si fiican loo ilaalin doonaa kiiskan. UAG waxay gaadhay in dabool u muuqda inuu "qallafsan yahay" jaleecada hore uu yahay ka soo horjeedka marka aad gacmaha ku qabato runtiina waad aragtaa baaxadiisa, dareenkeeda iyo dhammeystirkeeda.
Wax aan runtii aad u jeclahay ayaa ah badhanka daaridda / daminta iyo mugga. Runtii way weynyihiin, si aysan dhibaato ugala kulmin markaad riixayso, waxayna leeyihiin taabasho weyn, malaha badhano adag oo ay adagtahay in la riixo, ama badhano aadan ogeyn inaad riixday iyo inkale. Taabashada badhanka waa la keydiyay, waxaad yeelan doontaa dareen ah in lagugu cadaadinayo sidii adigoo aan daboolneyn. Qeybta hoose afhayeenka iyo makarafoonka, iyo sidoo kale isku xiraha danabka, way furan yihiin. Dhammaan afarta gees ayaa lagu xoojiyay si ay si fiican uga hortagaan dhibcaha, cirifka dacwadduna waxay ka soo baxdaa shaashadda si loo ilaaliyo markii la dhigayo wejiga iPhone ama ka soo horjeeda dhibcaha suurtagalka ah.
Way sii kordheysaa badanaa helitaanka daboolida tixraacaya shahaadada militariga oo ah tilmaame iska caabin ah dhicitaanka. Waa hagaag Boqortooyadaan UAG waxay adkeysataa laba jeer waxa shahaadadani u baahan tahay, sidaa darteed waad xasilloonaan kartaa marka aad ku dhejiso iPhone-kaaga. Rakibitaankeedu waa mid aad u fudud, ma jiraan qalab ama qaybo kala duwan oo la isugu keenayo, iyo dabacsanaanta qaabka dacwadda ayaa kuu oggolaanaya inaad geliso oo aad si fudud uga soo saarto iPhone-ka, adigoon wax dhibaato ah qabin.
Naqshadeynta qaabdhismeedka jirku wuxuu ka dhigayaa qabashada iPhone aad u wanaagsan. Intaa waxaa dheer, sidaan horay u sheegnay, in kasta oo kiisku u muuqan karo si kale, dhumucda ay ku dareyso iPhone ma aha tan kiisaska kale ee la midka ah. Marka loo eego heerka ilaalinta ee ay bixiso iyo dhumucdiisaba, Boqortooyada UAG waa mid ka mid ah kuwa ugu khafiifsan in aad ka heli karto arrintan la xiriira. Xaqiiqdii, waa kiis sifiican ula jaan qaada oo lagu soo dallacayo fiilo la'aantooda heerkul kasta oo Qi ah.
Haddii aad raadineyso kiis difaac ah oo leh naqshad dagaal leh laakiin dhammaadkiisa iyo qalabkiisu ay yihiin kuwo qiimo leh, Boqortooyada UAG waa waxa aad u baahan tahay. Ilaalinta ugu badan, naqshadeynta militariga iyo dhumuc aad u kooban, isku darka balaastigga, maqaar iyo bir ayaa gaara mid ka mid ah kiisaska ugu caansan suuqa. Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan (madow, casaan iyo kaarboonka) iyo dhammaan moodooyinka iPhone ee Amazon (isku xirka). Qiimaheedu waa € 54 inkasta oo ay ku kala duwan tahay qaabka la doortay.
Isku dheelitirnaanta dhumucda / ilaalinta
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » UAG Monarch, quruxda iyo bahalka kiisaska loogu talagalay iPhone-kaaga
Maalin kasta - Chip U1 ee iPhone-ka cusub